Maitiro Ekusetera Email Anyorese Anotarisira uye Wina!
Vari vako vemaemail vanyori vanodzvanya kuburikidza newebsite yako, kuodha zvigadzirwa zvako, kana kunyoresa zviitiko zvako sezvinotarisirwa? Aihwa? Pane kudaro, ivo havasi kungoteerera, kuzvinyoresa kana (kufema) vachinyunyuta? Kana zvirizvo, pamwe hausi kunyatso kusimbisa kutarisira pamwe.
Saka unoita sei iwe kutarisira kwakanyanya kune vako vanyore uye wozovamanikidza kuti vaite?
Udza munhu akanyorera CHOKWADI zvaunotarisira kubva kwavari.
Udza munhu akanyorera CHOKWADI izvo zvavanogona kutarisira zvako.
Do CHOKWADI zvawakati iwe uchaita.
Kuudza mumwe munhu zvauchazoita kana kuita kuti aite chimwe chinhu, nekungovabvunza, zviri nyore uye zviri pachena, handiti? Asi mazhinji emaimeri uye webhu kutaurirana hazviite. Ndokusaka vashambadzi vazhinji, kunyangwe paine mamwe mushandirapamwe wakagadzirwa zvakanaka, vanopedzisira vaine mashoma pane ezve stellar mhedzisiro uye vanodzikira mabhesi.
Izwi rekuti 'vaudze' rinogona kunge risinganzwisisike kune vazhinji vatengesi. Mushure mezvose, vanyori vako vanhu vakangwara uye ivo vanonzwisisa chigadzirwa chako uye izvo zvauri kuyedza kuita. Asi kana iwe uchinge wawana chako chekunyorera kutarisisa uye kuvimba, uye wobva waunza ese mabhenefiti ezvipo zvako, iko kubata-ruoko kwatanga chete. Heino chikonzero.
Hazvirevi kuti vanyoreri vako mbeveve. Ndivo, amai vako, uye mukoma wako. Asi kufanana newe ivo vakabatikana. Kune akawanda epedyo-temu mabasa anokwikwidza kutarisisa kwavo. Icho chokwadi ndechekuti vako vanokurumidza kunyorera vanogona kunge vasingazive zvavanofanira kuita zvinotevera, zvavanotarisira, kana kunyangwe ndiwe ani kana zvaunoda, kunze kwekunge iwe uchizvipepeta nekujekesa kunorwadza. Iwe zvechokwadi unofanirwa kutaurira munhu anonyorera chaizvo zvekuita, maitiro ekuzviita, uye nguva yekuzviita. Heano maitiro.
Kana iwe uchida kuti munhu anenge achinyorera aite chimwe chinhu, ngazvive kuwedzera email yako kero kune avo vakachengeteka anotumira runyorwa kana kutenga yako sevhisi, shandisa yakanyanya yakatarwa mitauro ine kongiri ruzivo mune yega kutaurirana. Usasiye chero mubvunzo nezve izvo zvaunoda kuti zviitike. Usatya kunyanyo kuve pachena. Sezvo nehukama hune hutano hwakavhurika, kutaurirana-nzira ndiyo kiyi yekubudirira. Asi inzira mbiri. Nekudaro, mukutsinhana iwe unofanirwa kutaurira munhu anenge achinyorera izvo zvaunenge uchiita (kana kusaita) kukurudzira kana kufambira mberi kwakataurwa hukama.
Kune nzira dzakawanda dzekumisirana zvinotarisirwa, rega yako yemakambani tsika ive yako gwara. Asi heino muenzaniso weiyo email yekusimbisa iyo ingangodaro yakave yakagadzirwa neanonoka, munyori mukuru gwaro Gary Halbert.
Musoro Mutsara / Musoro Wemusoro: Iwe wapinda! Zvino chii?
Zvemukati Zvemukati: Mhoro Sue. Tsika demo iyo yakakumbirwa ikozvino yakagadzirira uye yakamirira iwe pano. Paunongoshanyira (http://exampleurl.com/sue) isu tinobvunza kana iwe uchida kuyedza iyo sirivheri, goridhe, kana platinamu chirongwa. Sarudza platinum; ndiyo chaiyo kukosha kwakanyanya. Iyo demo inotora chete hafu yeawa asi iwe unozogona kujekesa kuita sarudzo yekutenga panguva iyoyo.
Kana pane chimwe chikonzero iwe usingakwanise kuona Demo rako rakagadziriswa nhasi, isu tichaedza kugadzirisa mamwe mavhiki maviri kubva pazuva rino, kunze kwekunge watitaurira neimwe nzira. Saka, iwe unoti kudini? Iko hakuna nguva senge iripo?tinya pano.
Kune vazhinji vatengesi nzira iyi inoita senge iri pamusoro pamusoro (pamwe nekuti ivo vanoziva chigadzirwa uye nemaitiro avo zvakare) asi kune wamunonyorera wakabatikana (nekuti urikukumbira kuti vashandise mari yavo uye / kana nguva), iri danho reruzivo inogadzira kunzwisisika kwekunzwisisa uye yakajeka kusheedzera kune chiito
Mune mamwe mazwi, kana iwe uchida kugadzira yakawanda inobudirira email yekushambadzira chirongwa iwe unofanirwa kuseta zvinotarisirwa kune ese mapato, kumberi uye nekuenderera mberi. Kutanga sarudza matanho auchatora. ita chete zviito izvozvo. Wobva wasarudza danho raunoda kuti munhu anyore atore; vabvunze kuti vatore chiito ichocho. Taura zvakajeka, zvakajeka uye pasina mubvunzo.
Tags: email unyoreemail kunyoresanokunyora magwaro
Sep 29, 2009 na6: 13 PM
Izvi zvakanaka chaizvo, uye ndakazvichengeta kuti zvionekwe.